BB Cream | SHANGRILA LEAP INT'L CO., LTD.
Short pt. for Doaru Foundation BB Cream
၁. BB Cream တစ်ခုတည်းကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် Foundation Cream make up,Sunscreen,Moisturizing Cream,Antiaging Cream,Whitening Cream,SkinTonicများတစ်ပြိုင်တည်းသုံးသကဲ့သို့ပြီးပြည့်စုံနိုင်စေသည်။
၃.Sunscreenကဲ့သို့UVAနှင့်UVBကိုကာကွယ်ပေး၍နေလာင်ဒဏ်ကြောင့်အသားအရေလျော့တိလျော့ရဲဖြစ်ခြင်း၊အသားမည်းသွားခြင်း၊နေလောင်ကွက်များဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊မှဲ့ခြောက်များ၊အစက်အပြောက်များဖြစ်ပေးမှုများကိုတားဆီးပေးခြင်း၊SPF 20+ ပါဝင်မှုကြောင့်နေလောင်ဒဏ်မှအဆ20အကာအကွယ်ပေးခြင်း၊နေရောင်အောက်တွင်BB Cream SPF 20+ ကိုအသုံးပြုထားပြီ3းနာရီကျော်ကျော်နှင့်BB Cream အသုံးမပြုပဲအချိန်၁၀မိနစ်နှင့်ညီမျှသည်။
Octyl Methoxycinnamate = UV absorber
Ubiquinone = Antioxidant/ Skin conditioning agent/Anti-wrinkle
Diisopropyl Adipate = Skin cooling and conditioning agent
Tocopherol = Vitamin E/ Antioxidant/ Nourishment for skin
Tocopherol Acetate = Vitamin E Derivative/ Antioxidant/ Nourishment for skin
Ascorbyl Tetraisopalmitate = Vitamin C/ Whitening agent
Dipotassium Glycyrrhizate = Whitening/ Anti-imflammtory
Sodium PCA = Moisturizing agent
Ceramide 1 = Skin Repair
Ceramide 3(Lacto-Ceramide) = Antiaging & Regenerating
Ceramide 6P = Skin Repair
Phytosphingosine = Skin firming/ Reduce deep wrinkle
Doaru Foundation BB Cream
BB Cream တစ်ခုတည်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် FoundationCream make up,Sunscreen,Moisturizing Cream,AntiagingCream,WhiteningCream,SkinTonicများတစ်ပြိုင်တည်းသုံးသကဲ့သို့ပြီးပြည့်စုံနိုင်ပါသည်။အသားအရေအတွက်လိုအပ်သည့်အာဟာရများအားဖြည့်တင်းပေူခြင်းကြောင့်ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေသည့်အသားအရေများကိုပြန်လည်အားဖြည့်ပေးပြီးစိုပြေ၀င်းပစေပါသည်။UVA နှင့် UVB ကိုကာကွယ်ပေး၍နေလောင်ဒဏ်ကြောင့်အသားအရေလျော့တိလျော့ရဲဖြစ်ခြင်း၊အသားမည်းသွားခြင်း၊နေလောင်ကွက်များဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊မှဲ့ခြောက်များ၊အစက်အပြောက်များဖြစ်ပေါ်မှုများကိုတားဆီးပေးပါသည်။VitaminCပါဝင်မှုကြောင့်အသားဖြူစင်ဝင်းပမှုကိုအလျင်မြန်ဆုံးရရှိစေနိုင်ပါသည်။အရေးအကြောင်းများကိုလျော့နည်းစေနိုင်၍အသားအရေအားတင်းရင်းစေပါသည်။၀က်ခြံ၊မှဲ့ခြောက်၊နေလောင်အစက်အပြောက်များဖြစ်ပွားမှုကိုဟန့်တားနိုင်၍သနပ်ခါးနှင့်တွဲသုံးရာတွင်သနပ်ခါးကြာရှည်စွာစွဲထင်ပြီင်္းပိုမိုလှပစေပါသည်။
© 2017-2018 SHANGRILA-LEAP INT'L CO., LTD. All Rights Reserved.